Nissan လုပ်ငန်းသုံးယဉ် ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
Nissan Nissan Nissan Atlas Nissan Clipper Nissan Condor
Nissan Atlas (Truck)	Price	-	190 L	SQ2F24-001193 , 2008Model, 1990CC, 10 Feet, 1.5Ton, 22,000KM, Grade 3.5B	Car No. -	Sati/…. Company License (...
White Nissan Cliper 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. အသံစနစ်ပါဝင်သည်။Cassette Radio. ဖော်ပြပါကားသည် ဆီစားသက်သာစေနိုင်သော Petro...
နစ်ဆန်း လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်များ
နစ်ဆန်း ဆိုတာ ဂျပန် နိုင်ငံ အခြေဆိုက် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစု ဖြစ်ပြီး ကား အမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ် ပါတယ်။ ယင်းထဲမှာ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်များလည်း အများ အပြား ပါဝင်ပြီး မြန်မာပြည် မှာပါ အောင်မြင်မှု ရရှိနေတဲ့ ကား အမှတ်တံဆိပ် တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက အိမ်စီးကား နဲ့ လုပ်ငန်း သုံး ယာဉ် မျှမျှ တတ ထုတ်လုပ် ပါတယ်။ အိမ်စီး မှာ ဆိုရင် နစ်ဆန်း ဆလွန်း များ ရေပန်းစား ပြီး လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် ထဲမှာ ဆိုရင် အလတ်စား ကားတွေ ပိုခေတ်စား ပါတယ်။ အထူး သဖြင့် မြို့တွင်းသုံး လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် တွေမှာ အသုံးပြု ပါတယ်။ သူ့ထဲက ရေပန်းစား တဲ့ ကား အချို့ ကိုပဲ ရေးသား ဖော်ပြ လိုက်ရ ပါတယ်။
နစ်ဆန်း လူသိများ ကား အချို့
Nissan Clipper/ ဆိုတာ ဈေးသက်သာ မြို့တွင်းသုံး အသးစား လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ် ၆၆၀ စီစီ သာ ရှိပြီး ဓာတ်ဆီသုံး ကား ဖြစ်ပါတယ်။ Nissan UD ကတော့ အလတ်စား ထရက်ကား ဖြစ်ပြီး အင်ဂျင် အရွယ် ၆၆၀၀ စီစီ တောင် ရှိပါတယ်။ ဒီဇယ် အင်ဂျင်သုံး ဆလင်ဒါ ၆ လုံးပူး ကား ဖြစ်ပြီးတော့ အားကြီး ကုန်တင်ယာဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို မြို့တွင်းလည်း အသုံးပြု သလို မြို့တစ်မြို့ နဲ့ တစ်မြို့ ခရီးတို ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေး အတွက်လည်း အသုံးပြု ပါတာယ်။ လေးဘီးမောင်း စနစ် အသုံးပြု တဲ့ ကား ဖြစ်ပြီးတော့ ဆီစားတော့ မသက်သာ လှ ပါဘူး။ ဒါကတော့ ကားကြီး တွေရဲ့ ထုံးစံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် တစ်မျိုး ကတော့ Nissan Vanette ဖြစ်ပြီး အလတ်စား လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် များ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ် ၂၀၀၀ စီစီ အရွယ်ရှိပြီး ဆလင်ဒါ ၆ လုံးပူး V အင်ဂျင်ကို အသုံးပြု ထား ပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် မော်ဒယ် အဝင် များပြီး အခြာသော ခုနှစ် မော်ဒယ် များလည်း ဝင်ရောက် ပါတယ်။ အော်တို ဂီယာ အမျိုး အစား အပြင် အခြားသော ရိုးရိုး ဂီယာနဲ့ ကားလည်း ဝင်ရောက် ပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုး ကတော့ တစ်တန်ခွဲကား လို့ ခေါ်တဲ့ Nissan Atlas လည်း ရှိပါ သေးတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ် ၂၀၀၀ စီစီ ရှိပြီးတော့ ဓာတ်ဆီသုံး ကား ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုး ဂီယာသုံး ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးလည်း သိပ် မများ ပါဘူး။ ၈၅ သိန်း ဝန်းကျင် နဲ့ ရနိုင်တဲ့ ကား မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ နစ်ဆန်း ကနေ ခရီးသည် ပို့ ဘတ်စ်ကား တွေလည်း ရှိပါ သေးတယ်။ ရန်ကုန် မြို့တွင်းမှာ အသုံးပြု ကြ ပါတယ်။ အများစုက သူ့ကို ကုမ္မဏီ ဝန်ထမ်း အကြိုပို့ တွေမှာ ပိုမို အသုံးပြုကြ ပါတယ်။
နစ်ဆန်း အခြားကား များ
နစ်ဆန်း ကနေ အခြားသော ကား မျိုးစုံလည်း ဝင်ရောက် ပါသေး တယ်။ အသစ် တွေကော အဟောင်း တွေကော ဝင် ပါတယ်။ ယခု နစ်ဆန်းက ရန်ကုန် မှာ တရားဝင် အရောင်း စင်တာ ဖွင့်လှစ် ထားရှိ ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း စင်တာ ကနေ အိမ်စီးကား အပြင် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် အချို့ ကိုလည်း ဝယ်ယူ ရရှိ နိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အမျိုးအစား ကတော့ အကန့်အသတ် နဲ့ ရှိနေ သေးတာ မို့ အများစုက လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် အတွက် ဆိုရင် ဂျပန် လေလံ ဈေးကွက်ကို ပိုမို အဓိကထား နေကြ ပါသေးတယ်။ ဂျပန် လေလံ ကနေ အဟောင်း တွေကို မှာကြ သလို၊ အသစ်တွေကိုလည်း မှာကြ ပါသေး တယ်။ Motors.com.mm ကနေ လည်း လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် အမျိုးမျိုးကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် လေ့လာ စုံစမ်း ဆက်သွယ် ဝယ်ယူ နိုင်ပါတယ်။